Qarax ka dhacay Muqdisho iyo Faah faahino kasoo baxaya Khasaaraha iyo cida lala eegtay – STAR FM SOMALIA
Qarax ka dhacay Muqdisho iyo Faah faahino kasoo baxaya Khasaaraha iyo cida lala eegtay
Waxaa duhurnimadii maanta Qarax gaari lagu soo xiray uu ka dhacay agagaarka Xaafada Dabakaayo Madow ee degmada Dharkeenley, waxaana qaraxan lasoo sheegayaa in uu ka dhashay khasaaro dhimasho.
Qaraxa ayaa haleelay gaari nuuciisu ahaa Kaarib, waxaana wararka aan heleyno sheegayaan in qaraxa uu ahaa nuuca gaadiidka lagu xiro, waxaana gaarigaasi la sheegay in ay la socdeen ciidamo katirsan Dowlada.
Inta la xaqiijiyay qaraxaasi waxaa ku dhintay askari la sheegay in uu katirsanaa ciidanka Nabad sugida iyo sirdoonak qaranka, askariga dhintay ayaa la tilmaamay in uu waday gaariga xiliga uu qarxyayay.
Ninka qaraxa lagu dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Aadan Cabdullahi Isaaq waxa uuna katirsanaa Ciidanka Nabad sugida gaar ahaan qeybta dhar cadka, waxaa sidoo kale la sheegay in uu ahaa macalin Dugsi.
Qaraxyada gaadiidka lagu xiro ayaa kusoo batay maalmahan magaalada Muqdisho, waxaana qaraxan uu noqonayaa kii labaad oo ka dhaca magaalada Muqdisho 24-kii saac ee lasoo dhaafay, waxaana qaraxyadaasi ka dhashay dhimasho.
Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta yeeshay kalfadhigiisa 1 aad
Baarlamaanka Somalia oo goordhaw codka Kalsoonida u qaaday R/Wasaare Kheyre